सञ्जयको कमब्याक - संगित - साप्ताहिक
माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ... गायक सञ्जय श्रेष्ठलाई सम्झनेबित्तिकै संगीतप्रेमीहरूले यही गीत सम्झिन थाल्छन् । सन् १९९२ मै स्थापना भएको सांगीतिक समूह क्रसरोड्समार्फत सांगीतिक क्षेत्रमा उदाएका गायक श्रेष्ठले यो अवधिमा दर्जनौं गीत गाए, तीमध्ये अधिकांश गीत लोकप्रिय भए । आजसम्म उनका गीत गुनगुनाउने श्रोताहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । फरक यत्ति हो, एक दशकअघिसम्म उनी केही वर्षको अन्तरालमा एक–एकवटा गीति एल्बम सार्वजनिक गर्थे, नयाँ–नयाँ गीत सिर्जना गरिरहन्थे अनि हप्तैपिच्छे कन्सर्टमा प्रस्तुत भैरहन्थे । पछिल्लो एक दशक उनी सांगीतिक क्षेत्रमा झन्डै–झन्डै निष्क्रियझैं रहे भने कन्सर्टमा पनि निकै कम देखिए ।
सञ्जय ३ महिना अघिदेखि फेरि सक्रिय भएका छन् । उनी एक्लै सक्रिय भएनन्, आफ्नो नाम तथा पहिचान जोडिएको सांगीतिक समूह क्रसरोड्सलाई नै सक्रिय गराए । यसपटक उनले आफ्नो ब्यान्डमा बिल्कुलै नयाँ सदस्यहरूलाई आबद्ध गराए । ब्यान्डका लागि उनीहरू नयाँ भए पनि सांगीतिक क्षेत्रका लागि भने पुरानै खेलाडी हुन् । गायक श्रेष्ठले आफूसँगै लिजेन्ड ब्यान्ड, प्रिजम ब्यान्ड, ब्लाइन्ड फेथ ब्यान्ड, कलिन्द ब्यान्ड आदि पुराना सांगीतिक समूहसँग आबद्ध संगीतकर्मीहरू ज्योति घिमिरे (गिटारिस्ट), उदेशलाल श्रेष्ठ (गिटारिस्ट), प्रवीण मानन्धर (ड्रम), भूपेन्द्र बज्राचार्य (गिटारिस्ट), रूपमसिंह गुरुङ (किबोर्ड) लाई समावेश गरेर क्रसरोड्सलाई पुन: जगाएका छन् ।
नयाँ सदस्यहरूसहितको क्रसरोड्सले पछिल्लो ३ महिनायता झन्डै एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा लाइभ कन्सर्ट दिइसकेको छ । ३ महिनाअघि ललितपुरस्थित एट डिग्री रेस्टुराँमा पहिलो कन्सर्ट दिएको थियो ।
गायक श्रेष्ठलाई लामो समयको अन्तरालपछि एउटै लाइभ कन्सर्टमा १५–१६ वटा गीत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने परीक्षण पनि गर्नु थियो । ब्यान्डका संगीतकर्मीहरूसहितको उक्त कन्सर्ट गायक श्रेष्ठले अपेक्षा गरेभन्दा सफल भयो । त्यसपछि उनीहरूले लगातार आफूलाई कहिले विराटनगर त कहिले दोलालघाट पुगेर सक्रिय बनाइरहे ।
यतिबेला हामीसँग १४ वटा कन्सर्टको सेड्युल तयार छ, साप्ताहिकसँगको भेटमा गायक श्रेष्ठले भने– हामीले देशका सातै प्रदेशका १४ वटा मुख्य–मुख्य सहरहरूमा कन्सर्ट दिने निश्चित भैसकेको छ । मिति घोषणा हुन बाँकी ती कन्सर्टमा दर्शकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने अपेक्षा गायक श्रेष्ठको छ ।
यसबीच गायक श्रेष्ठले आफ्नै शब्द, संगीत तथा स्वरको नयाँ गीत मेरी आमा भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन् । आमाको मुख हेर्ने दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतलाई गायक श्रेष्ठले संसारभरिका आमाहरूप्रति समर्पित भनेका छन् ।
भिडियोको निर्देशन पनि मैले नै गरेको हुँ, श्रेष्ठ भन्छन्— भिडियोमा मैले आफैंले तयार पारेका आमा र छोराको सम्बन्ध दर्साउने १४ वटा स्केचलाई ग्राफिक्समार्फत प्रस्तुत गरेको छु । नयाँ शैलीको गीत तथा फरक शैलीको भिडियो भएकाले दर्शक तथा श्रोताबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । उक्त गीत क्रसरोड्स ब्यान्डले आगामी दसैंअघि सार्वजनिक गर्ने सातौं एल्बम टिजिआइएफमा समावेश हुनेछ । '
उक्त एल्बममा समावेश गरिने पाँचमध्ये तीनवटा गीत रेकर्ड भैसकेका छन्, दुईवटा गीत रेकर्डका क्रममा छन् । मेरी आमाबाहेक थप दुई गीतको म्युजिक भिडियो निर्माणको क्रममा छ । एउटा गीतको भिडियोमा गायक श्रेष्ठले मिथिला संस्कृतिको चित्रण गर्ने बताएका छन् ।
गायक श्रेष्ठलाईसांगीतिक क्षेत्रमा पुन: सक्रिय हुने प्रेरणा उनकै प्रशंसकहरूले दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश, आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूको घचघच्याइ, नेपाली पप संगीतको खस्किँदो अवस्थाले हामीलाई पुन: सक्रिय हुन बाध्य बनायो, गायक श्रेष्ठ भन्छन्– सुगम पोखरेल, नवीन के भट्टराई, दीपक बज्राचार्यको पुस्तापछि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पप संगीतलाई जोगाउने पुस्ता नै आएन । त्यही भएर ढिलै भए पनि हामीले आफूलाई पुन: एक पटक सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका हौं ।
विगतको कन्सर्टलाई अहिले महोत्सव भित्र खुम्च्याइएकोमा गायक श्रेष्ठलाई दु:ख लागेको छ । कन्सर्ट भनेको कन्सर्ट नै हो, गायक श्रेष्ठ थप्छन्– कन्सर्टलाई व्यवसायभन्दा पनि संगीतकर्मीको भोक शान्त पार्ने माध्यम बनाइनुपर्छ । क्रसरोड्सले कन्सर्टको पुरानो शैलीलाई पुन: ताजा गराउनेछ । हामी अहिले त्यसकै तयारीमा जुटेका छौं । क्रसरोड्सले सातौं एल्बम सार्वजनिक गरेलगत्तै देशव्यापी टुर प्रारम्भ गर्नेछ । पुराना मेलोडीसहित नयाँ सिर्जनाहरू पस्केर यो ब्यान्डले पुरानो र नयाँ पुस्तालाई एकै ठाउँमा नचाउने र झुमाउन तयारी गरेको छ ।
संगीत सिर्जनालाई अत्याधुनिक प्रविधिले निकै सहज बनाए पनि नयाँ पुस्ताका संगीतकर्मीहरू खहरे खोलाका रूपमा मात्र प्रस्तुत भैरहेकोमा गायक श्रेष्ठ दु:खी छन् । गीत गायो, भिडियो बनाएर युट्युबमा फाल्यो अनि भ्युज गनेर बस्यो, श्रेष्ठको गुनासो छ– धेरै भ्युज हुने बित्तिकै, ट्ेरन्डिङमा पर्नेबित्तिकै गीत लोकप्रिय भएको कसरी मान्ने ? गीत त प्रत्येक दर्शक तथा श्रोताको मनमा बसेर उनीहरूले गुनगुनाउन थालेपछि मात्र लोकप्रिय भएको मानिन्छ । ६ फिटको बाकसजस्तो स्टेजमा काराओकेजस्तो ट्रयाकमा गीत गाउने शैलीलाई कन्सर्ट भन्न नरुचाउने गायक श्रेष्ठ लाइभ ब्यान्डसहितको प्रस्तुति मात्र वास्तविक कन्सर्ट हुने धारणा व्यक्त गर्छन् ।
माया मेरी माया, टाढा नजाइदेऊ तिमी, त्यो मुटुलाई, अञ्जान मायालु, सपनामा भुलेछु, एउटा गाउँ थियो, एघार बाह्र तेह्र, मुसुमुसु हाँसिदेऊ
क्रसरोडमा को–को ?
संजय श्रेष्ठ : गायन
ज्योति घिमिरे : लिड गिटारिस्ट
उदेशलाल श्रेष्ठ : बेस गिटारिस्ट
प्रविण मानन्धर : ड्रम
भूपेन्द्र बज्राचार्य : गिटार
रुपम सिंह गुरुङ : किबोर्ड
प्रकाशित :वैशाख २२, २०७५
रमेशको ‘सुपर ग्लू’ मार्फत नीता ढुंगानाको कमब्याक
कमब्याक गर्दै बास्केटबल
र्‍याप ब्यान्ड डिमोर्चाको कमब्याक